Ahoana no anaovana ny vola taratasy plastika any Aostralia - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Ahoana ny fomba anaovana ny vola taratasy plastika any Aostralia
Wow. Mampiasa vola taratasy plastika afaka mando i Aostralia ary tsy afaka vaky mihitsy. Ho fanampin'ny fanaovana sarotra ny fanaovana hosoka. Te hahita ny fomba anaovana azy ve ianao?
Nanana ny olana tamin'ny fihomboana haingana ny vola taratasy izy ireo. Tamin'ny taona 1988 dia nanomboka nanandrana karazana vola taratasy saika tsy simba izy ireo, vita amin'ny plastika.
Izy ireo no malaza Taratasim-bola Polymer
20 metatra matevina plastika. Raketo sary miaraka amin'ny laser amin'ny iray segondra isan-tsegondra. Manana ny zava-drehetra tianao izy
Fomba famokarana vola plastika avy amin'ny banky
Manomboka amin'ny fampiasana voamaina polymer izay miempo sy mamorona ranoka plastika amin'ny 120º izay latsaka amin'ny endrika riandrano silindrika ary raha manao izany izy dia ampangatsiahina amin'ny rano kely.
Amin'ity plastika ity dia manamboatra bubble izy ireo, ny lehibe indrindra manerantany, ny habeny dia mitovy amin'ny tranobe misy rihana 5. Miaraka amin'izany, ny zava-bitan'izy ireo amin'ny fitazonana ny tsindry dia ny velaran'ny tranom-borona rehetra, ny rindrina iray manontolo dia mitovy hateviny. Azon'izy ireo atsarina 20 m.
Eo ambanin'ny coil dia angonina ao anaty coil ny polymer ary toa mamonosina sakafo ny sarimihetsika mangarahara.
Ny olana ara-teknika iray hafa izay tsy maintsy vahana dia ny fomba fanontana amin'ny plastika mba tsy ho faty ny ranomainty.
Doko 5 palitao ny lokony amin'ny lafiny roa. Izy dia olona tena mifikitra. Ny faritra mangarahara sisa tavela izay ho toy ny varavarankely izay ampiasaina amin'ny olan'ny fandriam-pahalemana amin'ny volavolan-dalàna ary voamarina fa vita amin'ny jiro strobra daholo izy rehetra.
Amin'ny fampiasana laser, sary kely 5 no may eo am-baravarankely izay ho fepetra manohitra ny fanaovana sandoka.
Tapahina ho ravina ilay polymer avy eo.
Mety maharitra 2 taona mahery manomboka ny famolavolana ny vola taratasy mandra-pahatongan'ny famoahana azy.
Mba handalovana ny endrika nofinidy, izay feno pitsopitsony mba hialana amin'ny hosoka, dia mila atao amin'ny dingana roa izy:
Ny loko dia vita pirinty voalohany amin'ny alàlan'ny fampitana azy amin'ny gazety
Ny gazety faharoa dia manampy loko hafa sy antsipiriany kely
Miaraka amin'ny fiovaovan'ny hakitroky ny ranomainty dia omena ny fahamendrehana izay ahafahana manavaka ny faktiora tena izy amin'ireo sandoka miaraka amin'ny kitapo.
Miaraka amin'izany, saika vita ny banknotes fa tsy maintsy ampidinao ny laharan-tariby.
Rehefa vita pirinty dia tapaka izy ireo ary mandalo amin'ny masinina izay hanamarina ny tapakila tsirairay, manamarina fa tsy lavorary izy io. Talohan'ity asa ity dia nataon'ny vehivavy 70 ary nisafidy vehivavy ho an'ny asa izy ireo satria nihevitra izy ireo fa nifantoka bebe kokoa tamin'ny antsipiriany.
Tena vola plastika io ahem
Fanesorana dinamoy amin'ny bisikileta
Ahoana ny fanamboarana charger laptop